Saturday September 26, 2020 - 07:17:28 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar khasaara dhaliyay oo ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska.
Ruux muslim ah oo diinkooda uqiirooday ayaa weerar ka fuliyay afaafka hore ee dhismaha wargeyska Charlie Hebdo ee ku caanbaxay aflagaadeynta Nabi Muxamed SCW.
Saraakiisha Booliska Faransiiska ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ay si xun ugu dhaawacmeen weerarka waxaana laga dayrinayaa labo kamid ah gaalada dhaawacantay oo xaaladoodu ay aad uliidato.
Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ninka lagu magacaabo Gerald Darmannan oo booqday goobta uu weerarku ka dhacay ayaa sheegay in dhacdadan ay fuliyeen muslimiin isagoo ku sifeeyay weerar Argagaxiso.
"in weerarka uu ka dhacay wadada hoyga u ah xarunta Charlie Hebdo waa qaabkii ay u maleegeen argagixisada islaamiga ah shaki la'aan waa weerar cusub oo dhiig ku daatay kaas oo lagu beegsaday dalkeena" sidaas waxaa yiri wasiirka daakhiliga Farabsiiska.
Al Qaacidda ayaa sanaddii 2015 weerar midkaan lamid ah ku beegsatay xarunta wargeyska Charlie Hebdo ee magaalada Paris kadib markii uu faafiyay sawir gacmeedyo uu aflagaadaynayo Nabiga SCW, dhowaan markii uu waregysku dib ufaafiyay aflagaadada ayay Al Qaacidda markale hanjabaad jeedisay.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada Booliska Faransiiska ay xireen 7 ruux muslimiin ah oo ay uga shakisanyihiin in ay ku lug lahaayeen weerarkii shalay dhacay.